Shina: Tolo-kevitra momba ny fanavaozana ara-barotra mialohan’ny fivoriana ara-politika isan-taona · Global Voices teny Malagasy
Shina: Tolo-kevitra momba ny fanavaozana ara-barotra mialohan'ny fivoriana ara-politika isan-taona
Voadika ny 31 Oktobra 2018 13:10 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny 2010)
Raha manomboka androany ny Lianghui atao isan-taona ao Shina, feno tolokevitra maroloko indrindra izay iadian-kevitra mandritra ireo andro manaraka ny resaka an-tambajotra , toy ny avy amin'ny mpikambana ao amin'ny blaogy CPPCC Zhang Xiaomei izay maniry ireo lehilahy manambady (ambany fifanarahana?) mba hanome vola ny vadiny ho tambin'ny fanaovana raharaha an-tokantrano. Nifantohan'ny lahatsoratra am-blaogy maro ny fiovaovan'ny tsena izay tokony hanaraka ny fivoriana ara-politika.
Nanangona lahatsoratra maro avy amin'ny gazetim-panjakana Sinoa mikasika ity andiana fivoriana ity ny lahatsoratra iray ao amin'ny blaogy WordPress an'i Cricketdiane.
Ary na dia i Wang Xiaoya, olo-malazan'ny CCTV aza no blaogera tsy azo ialàna ho an'ny vaovao anatiny nandritra ireo Lianghui maro teo aloha, tamin'ity taona ity, toa nanakalo ny fitorahana blaogy tamin'ny fivoriana izy noho ny tetikasa iray niarahany tamin'i Sohu izay mikendry ny hamaly ireo fanontaniana sy fomba fijery eo amin'ny sehatra fitoraham-blaogy bitika an'ilay orinasa Aterineto.
Tonga ny hetsik'i Wang satria maro noho ny mahazatra ireo solontena mitoraka blaogy eny an-dalan-dry zareo ho any amin'ireo fivoriana. Atomboka amin'i Feng Jun, ilay Shinoa blaogera tia tanindrazana sady Tale Jeneraly ( an'ny aigo electronics), izay nanapa-kevitra tamin'ny voalohan'ny volana Martsa ny hanome topimaso kely mikasika ny tolokeviny ho an'ireo mpamaky:
Miaraka amin'ny Lianghui izay efa hanomboka, amin'ny maha solontenan'ny CPPCC ahy, niezaka ny hanangona amin'ny alalan'ny microblog ireo hevitra azo anarenana avy amin'ny olona aho. Tena niontam-po aho tamin'ny fahitana ireo olona rehetra naniry ny hiresaka malalaka mikasika ireo tolokeviny, ary tena feno fankasitrahana aho hoe matoky ahy ianareo rehetra! Noho izany, ankehitriny, te-hanome topimaso kely ho an'ny rehetra aho ary hanambara fa mifototra amin'ny ”fomba fampiroboroboana ny fizakantena mitondra zavabaovao amin'ny resaka stratejia nasionaly ny tolokevitro amin'ny Lianghui”
Telopolo taona tany Andrefan'ilay ony, telopolo taona tany Atsinanana; tokony hahatakatra ireo olona miombon-kevitra fa 2010 no taona hifindran'ny firenena Shinoa avy any amin'ny fahatokisana mankany amin'ny fireharehana. Miaraka amin'ilay fikarakarana nahomby ny Lalao Olaimpika sy ny fitsingerenan'ny faha-60 taonan'ny PRC tamin'ny 2008, indrindra noho ny krizy ara-toekarena manerantany amin'izao fotoana izao, sy ny fitazonana ny Harin-Karena Faobentsika amin'ny fitomboana tsy mijanona 8.7% nandritra ny taona 2009, afaka manamarina ianareo fa nahatratra ny fara-tampony ny fahatokisana sy ny firaisankinan'ny firenentsika manontolo. Ankoatra izany, tany amin'ny fiafaran'ny taona lasa, nanao antso mba hialana amin'ny ”vita shinoa” hankany amin'ny ”namboarina tany Shina” ny mpitondra nasionalintsika. Ankehitriny, noho ireo fepetra ahitan-tsoa ireo ary koa ny fanohanan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny, tonga ny fotoantsika. Havoakako manaraka eto ireo votoatin'ny tolokevitro, izay hiresaka mikasika ny resaka, fananana ara-tsaina, manerana izao tontolo izao ary lafiny hafa. Mandray ny fomba fijerin'ny mpampiasa aterineto rehetra aho. Miaraka, hamolavola tolokevitra ho an'ny fizakantena mpanavao an'i Shina isika.
Mivaky toy izao ny voalohany amin'ireo fanehoankevitra 100 ao amin'ny lahatsoratr'i Feng:
Rehefa afaka mamoaka lahatsoratra am-blaogy na mamela fanehoankevitra tsy mila fahazoandalana na mety ho famafàna isika, dia mety hanana vintana ihany ny ‘namboarina tany shina’. Ny sivana no fahavalo mamono ny fanavaozana. Mila fankatoavana ny sarimihetsika, mila fankatoavana ny kilalao amin'ny solosaina, mila fankatoavana ny tranonkala, na ny fandefasana fanehoankevitra aza dia mbola mila fankatoavana ihany. Fanavaozana re ry fitombenako e.